Mesut Ozil Oo Bannaanka Keenay Sirtii Laga Sugayey, Kooxda Uu Jecel Yahay, Haddii Uu Ka Qoomamoonayo Ku Biiristii Arsenal Iyo Mustaqbalkiisa | Laacibnet.net
Mesut Ozil Oo Bannaanka Keenay Sirtii Laga Sugayey, Kooxda Uu Jecel Yahay, Haddii Uu Ka Qoomamoonayo Ku Biiristii Arsenal Iyo Mustaqbalkiisa
Mesut Ozil ayaa shaaciyey kooxda uu ugu jeclaa yaraantiisii ee uu doonayo in uu haddana u ciyaaro mustaqbalka, laakiin waxa uu meesha ka saaray inuu ka qoomamoonayo go’aankii uu ugu wareegay Arsenal sannadkii 2013kii.
Laacibkan oo ka jawaabayay su’aalo laga weydiinayay baraha bulshada ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in yaraantiisii uu taageeri jiray kooxda Fenerbahce ee ka dhisan waddanka Turkey, taas oo uu xusay inay tahay Real Madrid-da waddanka Turkey.
Waxa kale oo uu xusay inuu jecel yahay inuu ku noolaado xaafadda ay ka dhisan tahay kooxdaas ee magaalada Istanbul, laakiin waxa kale oo uu xusay in mustaqbalkiisu uu noqon doono Maraykanka ama Turkiga marka uu dhamaado qandaraaskiisa Arsenal.
Ozil oo la weydiiyey haddii uu sii ciyaari doono kubadda cagta marka uu ka tago Arsenal ayaa yidhi: “Hubaal weeyaan oo waan sii ciyaari doonaa.”
Su’aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd waddanka uu qorshaynayo inuu ka ciyaaro, waxaanu ku jawaabay: “Waxa jira laba waddan oo aan doonayo inaan ka ciyaaro ka hor inta aanan kubadda ka fadhiisanin. Waa Turkey iyo Maraykanka.”
Kooxda reer Turkey ee uu u ciyaari doono haddii uu waddankaas tago ayuu shaaciyey, waxaanu yidhi: “Haddii aan tago Turkey, waxaan kaliya u ciyaari lahaa Fenerbahce.”
Hadalkan oo dabka kusii shiday hadal-hayntii ahayd inuu kooxdaas kusii jeedo, ayaa waxa kale oo uu sii raaciyey ammaan ah in Fenerbahce ay tahay Real Madrid oo kale amaba kooxda ugu wanaagsan waddankaas, waxaanu yidhi: “Waxaan koray anigoo taageeraya Fenerbahce waddanka Jarmalka gudihiisa. Qof kasta oo German-Turkish ah wuxuu taageeraa koox Turkey ah marka uu ku korayo Jarmalka. Aniguna waxaan taageeri jiray Fenerebahce.
“Fenerbahce waxaa sidii Real Madrid da Spain oo kale. Waa kooxda ugu weyn waddankaas.”
Mikel Arteta Iyo Edu Oo Sharaxay Saxiixii Lama Filaanka Ahaa Ee Ay Arsenal Sameysay Maanta
"Doqon Ma Ahi" - Frank Lampard Oo Jawaab Ka Bixiyay In Laga Ceyrinayo Shaqada Tababare Ee Chelsea
DEG-DEG: Tababare Zidane Oo Laga Helay Sadhada Korona Fayras & Xaaladiisii Xumayd Ee Real Madrid Oo Midkale Loogu Daray
Kooxdii uu jeclaa waad sheegten lkn sirtii laga sugayey meeday markaad website leeday dadka akhristayaashiina ah been looma sheego kooxdu jecla waad noo sheegten lkn sirtii laga sugayey meeday
Hhhhhhhh wlhi waan ka helay sida aad beenta noogu sheegtay milic iyo kamsaro caleenbaad noogu dartay sidaa noogu wad
Bahal bilaa milix ayaad noo dhiibtay kkkkkkki ozil kooxdii uu jeclaa ayaad taataabatay ka dibna sirtii aad sheegaysay waad ilowday lkn marka wax la idiin sheego raaligelin kama bixisaaan Africa waa Africa